Demystifying basa re automation muBig Data - NewGenApps
Makambani ari kushandisa data hombe kushandura mamiriro avo edhijitari uye otomatiki mashandiro esangano. Kusiyanisa kwedata kwakadzikiswa zvine mutsindo nekuwanda kwesimba rakasimba analytics. sezvo big data mafambiro akatara mafambiro kushandisa michina, makambani akatanga kusvetukira pane yakakura data bandwagon nerubatsiro rwevanoongorora data.
kushandisa michina yeBig Data ndeimwe yeakanyanya kubudirira kukanganisa shanduko kusvika zvino. Dhata hombe ndeyekuongorora data mapatani ayo anogona kuwedzera kubatsira mepu yeramangwana bhizinesi mazano. Kana data hombe rasangana neatomatiki maitiro, kuzivikanwa kweiyo data data kunowedzera kurongeka.
Recently, MIT vaongorori vakaita iyo Big Data Analytics bvunzo izvo hazvisanganisiri chinhu chevanhu mukugadzirisa kwayo. Kubata kwevakawanda data science makwikwi neiyo prototype Data Science Muchina wakaguma nekuita zvirinani kwe kushandisa michina kupfuura vakwikwidzi vayo. Chiyero chechokwadi chaive 96%. Chinhu chinonyanya kufadza ndechekuti michina yakadhirowa maalgorithms mumaawa mashoma, ayo vanhu vaive vatora mwedzi. Chinangwa chechiyedzo ichi chaive chekugadzira otomatiki Big Data Analysis kuti iongorore yakatarwa data uye kugadzirisa dambudziko rakanangana nedata.
Iyo rondedzero yemakambani akabudirira kuita fungidziro vachishandisa hombe data ongororo iri kukura, sezvo ivo vatora mukana weiyo data sainzi kosi kutanga nzira yekufungidzira kuongororwa.
Zvichienderana netekinoroji yaunoshandisa, unogona kuyedza, kuongorora, uye kunzwisisa chero huwandu hwe Big Data nenguva isipi. Zvakanakira kushandisa michina ndiko kuwedzera kwekushandiswa kweBig Data tekinoroji, mutengo wakaderera wekushandisa, kukwirira kwekushanda kwakanaka, uye yakagadziridzwa yekuzvishandira modules. Uyezve, inogona kuita sechiziviso chenhamba chinoshanda mumatafura edata mumaindasitiri akasiyana. Iyo inotoda iyo categorical data kune chero imwe mhando yedata kukudziridza seti yezvimiro zvine hukama kune mumwe nemumwe.
Iyi modhi yakaongorora kwakasiyana ichishandisa data-inosiyana-siyana kuInstitute of Electrical and Electronics Engineers International Conference on. Data Science uye Yepamberi Analytics. Nekuda kwehuchokwadi hwepamusoro hwekufembera uku, zvicherechedzo izvi zvakashandiswa kufanotaura nezveramangwana iro raive rechokwadi. Kuzvitaura zviri nyore, basa re kushandisa michina zvinoenderana nezvinhu zvina.
Simba re otomatiki Analytics yakakosha kutariswa sezvo inotarisa pane yakakosha dhizaini uye inogona kugadzirisa huwandu hukuru hwe data munguva pfupi. Iyo nzira ndeye pragmatic zvakanyanya kune categorization ye Analytics muzvikamu zvakasiyana. Zvikamu zvinosanganisira kunyorwa kwedata, kupatsanurwa kwayo munhambo dzenguva, uye kucherechedzwa kwe data data.
kushandisa michina yakaderedza nguva yakatorwa Kufanotaura Analytics kumwero mukuru. Izvo zvakabvisa kuomarara kwemaitiro e chokufenbera analytics; saka, yakabatsira data masayendisiti kumhanyisa maitiro ekuongorora data. kushandisa michina zvinoda mutauro wakasimba kuti utange hurongwa hwekuongorora kuburikidza nekurerutsa kuzivikanwa kwematambudziko ekufanotaura. Iyo inotora muakaunti yakarongedzerwa dhizaini iyo inogona kubata nemhando dzakasiyana dzezvakatemerwa zveanofanana zviito zvekuisa mumapoka uye kunyora data.
kushandisa michina inoita basa rakakosha mukumiririra data mune inoverengeka fomati. Zvakare, inopa simba vanoongorora kuti vawane iwo makuru ekufanotaura matambudziko uye kuwana mhinduro kwavari kuburikidza chokufenbera analytics. sezvo kushandisa michina inofarira kugovana data uye kuongororwa, kushamwaridzana pakati peData Analysts uye domain nyanzvi kwakawedzera zvakanyanya. Ikozvino, nyanzvi dziri pachinzvimbo chekushandisa mutauro we automated predictive analysis kugadzirisa matambudziko ekufanotaura. Izvi zvakaita kuti hurongwa hwese hwekuongorora kufungidzira hunyatsojeka.
Zvinoenderana nekuwanikwa kweotomatiki Analytics kumakambani. Cloud Computing inopa makambani ruzivo rwakadzama mune data munguva chaiyo. Sezvo iwe uchiwana kuwana Cognitive Computing Analytics uye zvechivanhu Bhizinesi Njere, iwe unozogona kuongorora data nekukurumidza. Data Lakes uye data ekugadzirira mapuratifomu akachinja chokufenbera analytics. Uyezve, kushandiswa kweSemantic kugadzirisa data yakamisa maitiro ekuyananisa data nemamwe data.
Big Data Analytics kushandisa michina izvi data science munzira dzakawanda. Ndichiri kubvisa zvinonetsa, iyi modhi yekuzvishandira yakagonesa varidzi vebhizinesi kuchera zvakadzama mudata. Kunyangwe maSMB anoziva nezvesimba rayo uye akaronga kuburitsa nyowani analytics mazano ekushandisa zvakanyanya chokufenbera analytics.